समस्यामा कोहली : इंग्ल्यान्डविरुद्ध सामी या भुवनेश्वर ? | सबै खेल
१४ असार २०७६, शनिबार १७:२६
इंग्ल्यान्डमा जारी विश्वकपमा भारतीय टिम लयमा छ । ६ खेलमा अपराजित रहेको भारत ११ अंकका साथ अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ, र उ सेमिफाइलनबाट एक जितमात्र टाढा छ । भारतले आइतबार आयोजक इंग्ल्यान्डसँग खेल्दै छ ।
यही खेललाई लिएर भारतीय कप्तान विराट कोहली केही दबाबमा परेका छन् । इंग्ल्यान्डविरुद्ध फास्ट बलिङको जिम्ममा क–कसलाई दिने भन्ने द्विविधामा छन् कोहली । उनलाई इंग्ल्यान्डविरुद्ध भुवनेश्वर कुमार र मोहम्मद सामी मध्ये कसलाई खेलाउने भन्ने द्विविधा छ ।
जारी विश्वकपमा भारत ब्याटिङमा भन्दा बलिङमा उत्कृष्ट देखिएको छ । अफगानिस्तान र वेस्टइन्डिनविरुद्ध उत्कृष्ट बलिङकै कारण भारतले जित निकाल्यो । स्पिन बलिङ सधैं बलियो मानिने भारत यो विश्वकपमा फास्ट बलिङमा उत्कृष्ट देखिएको छ ।
उसको फास्ट बलिङको जिम्मेवारी सम्हालेका जस्प्रित बुमराह, भुवनेश्वर कुमार र मोहम्मद सामीले सम्हालिरहेका छन् । प्रतियोतिगामा तीनै खेलाडी उत्कृष्ट लयमा देखिएका छन् । इंंग्ल्यानडविरुद्ध बुमराह खेल्ने निश्चित छ । तर, भुनेश्वर र सामीमध्ये कसले मौका पाउँछन्, त्यसमा धेरैको चासो छ । कप्तान कोहलीलाई भुवनेश्वर र सामी मध्ये एक चुन्न त्यति सहज भने हुने छैन ।
सुरुवाती ३ खेलमा पहिलो रोजाईमा खेलेका भुवनेश्वर कुमार पाकिस्ताविरुद्ध घाइते भए र त्यसपछि २ खेल उनले खेल्न सकेनन् । बलिङका क्रममा उनको मांसपेसीमा समस्या देखिएको थियो ।
भुवनेश्वरको अनुपस्थितिमा सामीले टिममा स्थान बनाए । त्यसपछिका दुवै खेलमा सामीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ८ विकेट लिए र आफू लयमा रहेको पुष्टि गरे । उनले अफगानिस्तानविरुद्ध त ह्याट्रिक नै लिए ।
भुवनेश्वर कुमार आइतबारको खेलका लागि फिट भइसकेकाले यी दुईमध्ये कसलाई खेलाउने भन्ने समस्यामा भारतीय टिम परेको छ । के कोहलीले सामीलाई बारिह राख्दै भुवनेश्वरलाई खेलाउँछन् ? तर, यो निर्णय लिन त्यति सहज भने हुने छैन । किनभने सामी उत्कृष्ट लयमा छन्, र उनको स्थानमा भुवनेश्वरलाई खेलाउने निर्णय भारतका लागि घातक हुन सक्छ ।
कोहलीका सामू बुमरामह, सामी र भुवनेश्वर तीनैजनालाई खेलाउने विकल्प भने छ । यसका लागि कुलदीप यादव र युजभन्द्र चहलमध्ये एकलाई बाहिर राख्नु पर्ने हुन्छ या एक ब्याट्सम्यानलाई हटाउँदै ५ बलर खेलाउन सक्छन् । तर, यसले टिमको सन्तुलन बिग्रन सक्छ ।
इंग्ल्यान्डविरुद्ध ३ फास्ट बलर खेलाउने हो भने कुलदीप यादव र युजभन्द्र चहलमध्ये एकलाई खेलाउने र खासै चल्न नसकेका ब्याट्सम्यान केदार जाधवको स्थानमा अलराउन्डर रविन्द्र जडेजालाई खेलाउनु उचित देखिन्छ ।
Tags: bhuvneshwar kumar, ICC World Cup 2019, Mohammed Shami, virat kohli